Rwizi Pungwe - Wikipedia
Rwizi Pungwe (Pungwe River) rwizi rwakareba 400km ruri muZimbabwe neMozambique. Rwizi urwu runotangira mujinga regomo Nyangani riri kuMabvazuva kweZimbabwe. Kubva ipapa runoyerera kuenda kuMabvazuva ruchipinda muProvince dzeManica neSofala kuMozambique. Pungwe anodira muIndian Ocean panzvimbo yeMuronga weMozambique (Mozambique Channel). Pungwe anoverengwa pahova huru dzeMozambique; mune makore emvura zhinji anokonzera murove nemafashama emvura munyika iyi.
Kunobva mvura yaPungweEdit
Mvura inoyerera muna Pungwe inobva muProvince dzeSofala nemanica kuMozambique; nzvimbo iyi ine vanhu 1,081,000 vanowana mvura yerwizi urwu. Imwe muvura inobvawo kudunhu reMutasa muZimbabwe; chikamu chidiki chemvura chinowanikwa kubva kudunhu reNyanga. MuZimbabwe mune vanhu 96,000 vanowana mvura kubva muna Pungwe.
Mashandisiro eMvura yaPungweEdit
Zimbabwe neMozambique dzine chirongwa chinotonga mashandisirwo emvura yarwizi Pungwe. Guta reBeira nenzvimbo dzakatenderedza dzinowana mvura kubva muna Pungwe. Mugore ra2004 guta irir raitora mvura inosvika 25,339 m3 pazuva kubva muna Pungwe.
Guta reMutare rinotorawo mvura kubva kuna Pungwe; zvichitevera chibvumirano chakanyorwa pakati peZimbabwe neMozambique, Mutare inotenderwa kutora mvura inosvika 60,480 cubic meters pazuva.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Rwizi_Pungwe&oldid=59541"
Last edited on 25 Nyamavhuvhu 2018, at 21:53